ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ https://nugmyanmar.orgအပတ်စဉ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၈/၂၀၂၁)၁၆ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ခုနှစ်၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော တရားဝင် အစိုးရဖြစ်သည့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ ( National Unity Government - NUG Myanmar ) နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH တို့အား ထောက်ခံအားပေးရေးအဆိုကို အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် ဥရောပပါလီမန်နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည့် ပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်တို့ကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကျေးဇူးမှတ်တမ်း တင်အပ်ပါသည်။ ၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ သို့ အခွန်ထမ်းဆောင်လိုသည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ird.nug-mm.net မှတဆင့် အခွန် ပေးဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနက အသိပေးအပ်ပါသည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန ၏ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/IRDMOPFI တွင်လည်း အခွန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော သိရှိလိုသည်များကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ၃။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် (၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော အရေးကိစ္စများကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလျက်ရှိပြီး ဆွေးနွေးချက်များကို နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/Myanmarmisson တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။၄။ ပြည်သူ့ခုခံစစ်များ နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/modNUG နှင့် ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/mohaimyanmar များတွင် နေ့စဉ်စုစည်းဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်။ ၅။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲများအတွင်း ရဲရင့်စွာ တိုက်ပွဲဝင်သွားကြသော ကျဆုံးသူရဲကောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကောက်ယူလျက်ရှိပြီး ကျဆုံးတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းများ၏ အချက်အလက်များကို အောက်ပါ Form တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ https://forms.gle/7NoT9SZuvcwJXa9y7
(၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပထမကော်မတီ (လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကော်မတီ) ၏ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်တွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း(နယူးယောက်မြို့၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်)ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း သည် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် နေ့နံနက်ပိုင်း၌ ပြုလုပ်သည့် (၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ၊ ပထမကော်မတီ၏ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ မိန့်ခွန်း ပြောကြားမှု အစီအစဉ် တွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ပြောကြားရာတွင် သံအမတ်ကြီးမှ အောက်ဖော်ပြပါ အဓိကအချက်များကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်-(က) နျူကလီးယားလက်နက်များတည်ရှိခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်များ အတွက် အကြီးမားဆုံး လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်ကို သတိမူရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နျူကလီးယားခြိမ်းခြောက်မှုများသည် လူသားမျိုးနွယ်တည်ရှိမှုအတွက် အဆိုးရွားဆုံး လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါကြောင်း၊(ခ) နျူကလီးယားလက်နက်များ အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးသည် ယင်းလက်နက်များ အသုံး ပြုမှု သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်မှုများအတွက် တစ်ခုတည်းသော အာမခံချက် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊(ဂ) ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် နျူကလီးယားလက်နက် တားဆီး ပိတ်ပင် ရေး ဆိုင်ရာစာချုပ် (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW) အသက်ဝင် ခဲ့ခြင်းသည်ကြိုဆိုရမည့် တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နျူကလီယား လက်နက်များ ကင်းစင်သော ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုမည် ဟု ယုံကြည် ပါကြောင်း၊(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နျူကလီးယားလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်သို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး၊ ယခု၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် အတည်ပြု ပါဝင်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ အကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏ တရားမဝင် အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် အတည်ပြု ပါဝင်ရေးသည် လက်ရှိတွင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကတိကဝတ် အပေါ် သံသယ ဖြစ်စရာ မလိုပါကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူများမှ တရားနည်းလမ်းကျ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ထားသည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် အမြန်ဆုံး အတည်ပြု ပါဝင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊(င) ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပထမကော်မတီတွင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ “Nuclear Disarmament” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကနှစ်စဉ် ကမကထပြု တင်သွင်း သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်ကို ယခုနှစ်တွင်လည်း ဆက်လက်တင်သွင်း သွားမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ယခင်နှစ်များတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ထောက်ခံပံ့ပိုးခဲ့မှုများအတွက် ကျေးဇူး တင်ရှိ ပါကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်တွင် လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုအပေါ် ဆက်လက် ထောက်ခံ ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါကြောင်း၊(စ) လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကဏ္ဍအတွက် တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံစုံအဆင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး သည့် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးညီလာခံ (Conference on Disarmament) တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကနဉီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည့် အားလျော်စွာ ယခု ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွင်း အဆိုပါညီလာခံ၌ ဆွေးနွေးမှုများတွင် တူညီဆန္ဒမရရှိခဲ့ခြင်း အပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါကြောင်းနှင့် နှစ်ပေါင်း များစွာ နှောင့်နှေးလျက်ရှိသည့် လက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး ညီလာခံ၏ လုပ်ငန်းများရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ သဘောထားပျော့ပြောင်းမှုကို ပြသရန် တိုက်တွန်းလိုပါ ကြောင်း၊(ဆ) ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်သို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ အတည်ပြုပါဝင်ခဲ့သည့် အားလျော်စွာ စစ်တပ်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရပ်သားအစိုးရသည် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါကြောင်း၊ မကြာသေးမီအချိန်က လုံလောက်သည့် သက်သေအထောက်အထားများအရ မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည့် (schedule 1 chemical) ပါ ဓာတု ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည်ဆိုသည့် ဖျက်သိမ်းပြီး ဓာတု စက်ရုံနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တင်ပြ ကြေညာရန် ပျက်ကွက်လျက်ရှိသည် ကို အရပ်သားအစိုးရက မကြာသေးမီအချိန်ကမှ သိရှိရပါကြောင်း၊ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းများကြောင့် အဆိုပါ ပျက်ကွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါကြောင်း၊(ဇ) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် တရားဝင် အာဏာပိုင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်း များသည် နိုင်ငံ၏ နယ်မြေဒေသများနှင့် ပြည်သူများကို ကာကွယ်ရန် အတွက် သမားရိုးကျ လက်နက်များအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်ကို ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အာဏာရှိသူများသည် အဆိုပါလက်နက်များကို တာဝန်မဲ့စွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် လူသားများအနေဖြင့် ထိခိုက် နာကျင်မှုများ၊ သေကြေပျက်ဆီးမှုများနှင့် ဒုက္ခအလုံးစုံကို ခံစားနေရပါကြောင်း၊ အာဏာရှိသူများ သည် အဆိုပါလက်နက်များကို ကိုယ်ကျိုး စီးပွား အတွက် အလွဲသုံးစားအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပွားလျှက် ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူများသည် အဆိုပါ အခြေအနေများကို လက်ရှိရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ နေရပါကြောင်း၊ စစ်တပ်သည် ချေမှုန်းရေး ရိုင်ဖယ်များ၊ လက်နက်ကြီးများ၊ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အခြားလက်နက်များကို အသုံးပြု၍ပြည်သူများအပေါ် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုများ ကျူးလွန်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊(ဈ) သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာစစ်တပ်သို့ လက်နက်များ၊ ကျည်ဆံများနှင့် ဆက်စပ်နည်း ပညာများ ရောင်းချနေသည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူများ၏ အသက်များကို ကယ်တင် ပေးနိုင်ရေး အတွက် ရောင်းချနေမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်နိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါကြောင်း။သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ပြောကြားခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံကို ပူးတွဲ ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ နယူးယောက်မြို့။ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်။
Republic of the Union of MyanmarNational Unity Governmenthttps://nugmyanmar.orgResponse to the briefing by Mr. Andrew Kirkwood, United Nations Resident Coordinator a.i and Humanitarian Coordinator a.i 1. IntroductionThe National Unity Government of Myanmar (NUG) recognises the critical roles performed by United Nations (UN) agencies, funds and programmes in Myanmar, and restates its commitment to working in partnership with the UN Country Team (UNCT) and the Resident Coordinator’s Office. The NUG also notes the3October 2021 media briefing by Mr. Andrew Kirkwood, UN Resident Coordinator a.i and Humanitarian Coordinator a.i. It is however concerned by some inaccurate and misleading representations and significant omissions. They are addressed in this statement.2. Military takeoverThe Resident Coordinator a.i. referred toa“military takeover” and claimed that the military had “seized control”. This isadangerous misrepresentation. The NUG, Ethnic Armed Organisations (EAOs), and pro-NUG districts and local communities control significant swathes of territory and are delivering essential services, including healthcare, education and humanitarian assistance. The NUG is constituted of and was established by democratically-elected parliamentarians and enjoys the popular support of the people. Critically, the UN Security Council and the General Assembly have recognised the continuing authority of President U Win Myint and State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.The Myanmar military staged an illegal, unsuccessful coup d’état on 1 February 2021 and has since been unable to wrest control of the country’s territory, infrastructure or institutions. It has collapsed service provision. It has acted unlawfully and unconstitutionally. It is opposed by the Myanmar people onamass, country-wide scale, including by civil servants. On no grounds has the military junta “taken over” or “seized control”.3. Multi-dimensional crisisThe Resident Coordinator a.i. rightfully spoke of “a crisis on top ofacrisis with yet another crisis on top of that”. What he failed to add during his discussion of the “devastating third wave” of COVID-19 is that these are military-induced crises. The military junta has weaponised COVID-19 through targeted attacks on medical personnel and by withholding access to medical treatment, medicines, oxygen and vaccines. An unknown number of people have died and millions have been plunged into poverty – the same millions that the UNCT is now struggling to reach.4. DisplacementThe Resident Coordinator a.i. reported that over 200,000 people have been “newly displaced” since 1 February 2021 “due to the conflict between the Myanmar armed forces, many of the ethnic armed organizations, and these newly formed People’s Defence Forces”. This statement stopped short of linking displacement to the large scale and widespread military operations that have seen civilians executed and tortured, villages raided and torched, and property destroyed and looted. These military actions comprise grave violations of human rights and international humanitarian law, and in some cases crimes against humanity. It is disingenuous and dangerous to generically attribute displacement to “conflict”.5. Humanitarian accessThe NUG stands ready to work in partnership with the UNCT and humanitarian agencies to facilitate the delivery of emergency assistance and supplies. The Resident Coordinator a.i. has called on “all parties to use their influence to facilitate… safe and unhindered access”. As the legitimate Government of Myanmar, the NUG will meet this call. However, it is critical that the international community and the UNCT acknowledge that the military junta’s actions are plunging the country intoadeeper humanitarian crisis.6. Human rights and accountabilityThe Resident Coordinator a.i. did not makeasingle reference to human rights or to military atrocities in his statement. Only ten days earlier, the UN High Commissioner for Human Rights briefed the UN Human Rights Council on the military’s crimes, reporting: serious violations of human rights and international humanitarian law, including violations of the rights to life, liberty, and security of person; the prohibition against torture; fair trial guarantees; freedom of expression, and freedom of peaceful assembly. Several of these violations may amount to crimes against humanity committed as part ofawidespread or systematic attack against the civilian population – or, to the extent arising in armed conflict, war crimes. The High Commissioner added that ‘[t]he human rights violations… being committed by the Tatmadaw today are built upon the impunity with which they perpetrated the shocking campaigns of violence against the Rohingya just four years ago – and also against many other ethnic minorities over decades.’ The Resident Coordinator a.i. must presentamore comprehensive picture of the UN’s work in country, including by addressing human rights concerns. The Rosenthal Report on the UN’s involvement in Myanmar foundacollective failure on behalf of the UN system to convey ‘more forcefully the United Nations’ principled concerns regarding grave human rights violations.’ These failures must not be repeated.7. DepoliticisationThe Resident Coordinator a.i. has called fora“depoliticised” humanitarian response. The military junta continues to apply its well-worn tactic of holding human lives to ransom. The UNCT must not take the bait by engaging with the junta based on justifications such as “staying and delivering” or “securingalicense to operate”. The UNCT must strictly abide by its Engagement Principles, which demand that all programmes accrue benefits directly to the people and in no way grant legitimacy to the military junta. To act otherwise would see the UNCT enable the very “politicisation” that the Resident Coordinator a.i. has warned against. The UNCT is at grave risk of being instrumentalised by the military junta.8. Socio-Economic Response Framework (SERF) for MyanmarThe NUG supports the Resident Coordinator a.i. in calling for increased contributions to alleviate the dire suffering in Myanmar. We stand ready to support SERF implementation. All humanitarian and development projects must be implemented through the NUG and its partners, EAOs, INGOs, NGOs, local and civil society organisations, and community-based organisations. Notasingle dollar should be directed to the military junta. Calls have been made for the Security Council to list the military junta asaterrorist organisation. The UNCT and donor agencies should treat it as such.9. Conclusions and recommendationsThe NUG requests clarifications from the Resident Coordinator a.i in the form ofacorrective statement. Particular caution must be exercised to avoid phrases that misrepresent the situation in Myanmar. The NUG also calls on the Resident Coordinator a.i. and the UNCT to:• Engage directly with the NUG as the legitimate Government of Myanmar. The NUG and its partners control significant territory, deliver essential services, and enjoy the support of the people. The Security Council and the General Assembly continue to recognise the authority of President U Win Myint and State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, and the NUG’s Permanent Representative to the UN continues to represent Myanmar in UN fora. • Ensure that all humanitarian and development projects are implemented through the NUG and its partners, EAOs, INGOs, NGOs, local and civil society organisations, and community-based organisations. Notasingle dollar should be directed to the military junta • Avoid taking any actions that legitimise the military junta, in line with the UNCT’s Engagement Principles • More comprehensively present the views of UNCT members, including with regard to the human rights situation in Myanmar and military atrocities • Update the UNCT’s Human Rights Strategy. New programmes must be informed by human rights due diligence, conflict-sensitivity and risk assessments, and the do no harm principle. The Strategy should also identify the NUG as the primary implementing partner.Finally, the NUG calls on the UN Secretary-General to formally appoint the new Resident Coordinator asamatter of urgency, in consultation with the NUG.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.orgအပတ်စဉ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၇/၂၀၂၁)၁ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ခုနှစ်၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် “နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ ပိုင်ဆိုင်သည့် နေအိမ်၊ အဆောက်အဦ၊ ဥပစာနှင့် ပစ္စည်းများ၊ နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦ နှင့် မြေကွက်များအား အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ တရားမဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကြေညာချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၂၁) ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခြ့သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်စွဲပါကြေညာချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၂၁)နဲ့ အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်အပါအဝင် ယင်းကောင်စီရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ လုံးဝ (လုံးဝ) တရားမဝင်ကြောင်း၊ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တရားမဲ့ပြုကျင့်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦ၊ ဥပစာနဲ့ ပစ္စည်းတွေအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ အကျိုးစီးပွားပျက်စီးဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေအပေါ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူ့ အစိုးရအာဏာ အပြည့်အဝကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်မှာ ဥပဒေနဲ့အညီ တရားမျှတမှု ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေး အစွမ်းကုန် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံပိုင်မြေ၊အဆောက်အဦနဲ့မြေကွက်တွေကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက တနည်းနည်းနဲ့ လွှဲပြောင်းတာ ရောင်းချတာ၊ ငှားရမ်းတာ၊ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေဟာလဲ တရားဝင်မှုလုံးဝ မရှိ တာကြောင့် ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လည် သိမ်းယူ သွားမှာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူငှားရမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေကို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ အပါအဝင် တည်ဆဲ ဥပဒေတွေနဲ့အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဒီလို တရားမဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အထောက်အထားတွေနဲ့ စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီး အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်က သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေက တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ တိုင်တန်းရမယ့်နေရာတွေကို သတင်းပေးပို့တိုင်တန်းပေးဖို့ကိုလဲ တိုက်တွန်းပန်ကြားကြောင်းတို့ ပါဝင်သည်။၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ ပြည်သူ့အာဏာကိုလုယူခဲ့မှုကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြည်သူလူထု အပေါ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေကို အစွမ်းကုန် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေနဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေနဲ့ ကျဆုံးသူတွေရဲ့ မိသားစုတွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေရသူတွေ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုတွေနဲ့ တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ရိက္ခာလိုအပ်ချက်ရှိနေသော ပြည်သူများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့အတွင်း စုစုပေါင်း ငွေကျပ် (၁.၃၅) ဘီလီယံကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၃။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက “ကလေးသူငယ်တွေအပါအဝင် အရပ်သားတွေအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချက်”ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် စစ်တပ်၏ မတရား အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင် တဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဆင်နွှဲခဲ့တာဟာ ၈လခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါကာလများတွင် အာဏာ သိမ်းစစ်ကောင်စီသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကျူးလွန်နေသလို ကျူး လွန်မှုတွေကို နေရာအနှံ့အပြားမှာ စနစ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အထောက်အထားများကြောင့် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်နေတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း စစ်ကောင်စီရဲ့ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့တွန်းလှန်ရာမှာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ် ထိခိုက်မှုတွေ မရှိစေဖို့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားကာကွယ်မှုတွေ ရှိလာစေဖို့ အတွက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့ စစ်သည်တော်ကျင့်ဝတ်တွေ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို တင်းကြပ်စွာလိုက်နာကြဖို့ ထပ်လောင်းအသိပေးလိုကြောင်း၊ အပြည်မဲ့ပြည်သူတွေ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီး ကလေးသူငယ် သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ မသန်စွမ်းတွေ အပါအဝင် အထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ သူတွေကို အကြမ်းဖက်ခြင်းဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အရာမဟုတ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခကာလအတွင်း အမျိုးသမီးများနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေကို အထူးကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်တွေမှာ အတိအလင်း ဖော်ပြထားကြောင်း၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ အမျိုးသမီး ကလေးသူငယ်တွေအပေါ် ကျူးလွန်မှုတွေ အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှုတွေကို ဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ပြီး အပြစ်ရှိသူတွေကို တရားဥပဒေနဲ့အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက် ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်စေ သာမန်အရပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး ၊ ကလေး သူငယ်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ မသန်စွမ်းတွေ အပါအဝင် အထူးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေး ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သူတွေကို မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တပ်ဖွဲ့ ဘယ်အုပ်စုကမှ မကျူးလွန်ဖို့လည်း တာဝန်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်မှာ မိမိနည်း မိမိဟန်နဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို တွန်းလှန်နေကြတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အသီးသီးအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်မိခြင်း မရှိစေဖို့ အထူးဂရုပြုကြဖို့လိုအပ်ကြောင်း စတဲ့အချက်များပါဝင်သည်။ ၄။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင် သည် ဆွီဒင်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Ann Linde နှင့် တွေ့ဆုံကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ၊ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများ၊မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဒီမိုကရေအရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေများအကြောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းသန့်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
01 October 2021 သတင်း
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့ ကို ဂုဏ်ပြု သဝဏ်လွှာပေးပို့၁ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ခုနှစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းက တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့ ကို ဂုဏ်ပြု သဝဏ်လွှာကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ ၇၂ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်သူ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့ အကောင်းဆုံး ဆုမွန် တောင်းပေး လိုက်ပါတယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG)ရဲ့ သဝဏ်လွှာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တရုတ် ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးက မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်းဟာ တရုတ်ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့ ကံတရားကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီး သမိုင်းခေတ်သစ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ၊ ဒီခေတ်သစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာကို လက်လှမ်းမီတဲ့ အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်လာပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ကြွယ်ဝမှု တဖြည်းဖြည်း တိုးလာတာကို မှတ်ကျောက်တင် ခံနိုင်လာတာကို မြင်ရတယ်လို့လဲ ဝန်ကြီးချုပ်က သဝဏ်လွှာ ထဲမှာ ပြောထားပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနဲ့ တရုတ်တို့ဟာ အားကောင်းပြီး ထူးခြားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ထောင်ထားခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေ အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေး ရရှိတာ သေချာစေဖို့ နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရအပြီး မြန်မာ့ ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုဟာ ၁၉၅၀ မှာ တရုတ်နဲ့ သံတမန် ဆက်ဆံရေး ချက်ချင်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံချင်း ချစ်ကြည်ရေးအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်ဖို့ တရုတ်ခေါင်းဆောင် မော်စီတုံးရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံတလွှား ခရီးဆန့်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာလဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ကို သွားရောက် လည်ပတ်ပြီး တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ အတွက်နဲ့ မြန်မာပြည်သူ အားလုံးအတွက် တရုတ်မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ကတိကဝတ်တွေ အတွက် NUG အစိုးရက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တရုတ်အမျိုးသားနေ့ အခါသမယမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်၊ ချစ်ကြည်ရေး တိုးမြင့်အောင် ဆောင်ရွက်ရာမှာ တရုတ်နဲ့ မိတ်ဖက်ဖြစ်ဖို့ NUG အစိုးရက အဆင်သင့် ရှိနေပြီး အနာဂတ်တွေကို မျှဝေထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းဖို့ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံနဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေး အားဖြည့်ဖို့ ဆက်လက် ကတိပြုချင်ပါတယ်လို့ သဝဏ်လွှာထဲမှာ ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.orgကြေညာချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၂၁)၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပိုင်ဆိုင်သည့် နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ ဥပစာနှင့်ပစ္စည်းများ၊ နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အဦ နှင့်မြေကွက်များအားအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ တရားမဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း။၁။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်စွဲပါကြေညာချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၂၁) ဖြင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟု မိမိကိုယ်ကိုမိမိအမည်ပေးထားသော အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအား အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၂။ ထို့ကြောင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ထပ်မံအသွင်ပြောင်းဖွဲ့စည်း သည့်အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်အပါအဝင် ယင်းကောင်စီ၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များသည် လုံးဝ (လုံးဝ) တရားမဝင်ပါ။၃။ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနှင့် ယင်း၏လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ တရားမဲ့ပြုကျင့်ဆောင်ရွက်ချက် များကြောင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပိုင်ဆိုင်သည့် နေအိမ်၊ အဆောက်အဦ၊ ဥပစာနှင့် ပစ္စည်းများအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကျိုးစီးပွားများပျက်စီးဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအပေါ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူ့ အစိုးရအာဏာ အပြည့်အဝကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရရှိသည့်အခါ တရားမဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရမှုများအတွက် ဥပဒေ နှင့်အညီ တရားမျှတမှု ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေး အစွမ်းကုန် အာမခံဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။၄။ ထို့အပြင် နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့်မြေကွက်များကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ တနည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများသည် တရားဝင်မှုလုံးဝ မရှိ သောကြောင့် ပြည်သူ့အစိုးရအာဏာအပြည့်အဝ ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရရှိချိန်တွင် ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လည် သိမ်းယူ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူငှားရမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအား အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ အပါအဝင် တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။၅။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနှင့်ယင်း၏လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်း အဆင့် ဆင့်၏ တရားမဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များကို အထောက်အထားများဖြင့်စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် တိုင်တန်းရမည့် နေရာများသို့ သတင်းပေးပို့တိုင်တန်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ကြပါရန်လည်း အလေးအနက် တိုက်တွန်းပန်ကြားအပ် ပါသည်။
24 September 2021 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.orgအပတ်စဉ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၆/၂၀၂၁)၂၄ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၁ခုနှစ်၁။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် တိုင်းဒေသကြီး နှစ်ခု၌ စစ်ကောင်စီက အရပ်သားများအပေါ် စတင်ထိုးစစ်ဆင်၍ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ် နှင့်စက်တင်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများ၊ အသက်သေဆုံးသည်အထိ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ၊ တရားဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးမှုများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအနေဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်အား လက်နက်များတင်ပို့ရောင်းချခြင်းနှင့် စစ်ရေးအကူအညီပေးအပ်ခြင်းများ ရပ်တန့်ရန်၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပြီး တရားမျှတမှုအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတရားရုံးအပါအဝင် နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မှတဆင့် ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် အကြမ်းဖက်ခံနေရသော စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးများမှ ပြည်သူများအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူများအား လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေးရန် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက တောင်းဆိုထားပါသည်။၂။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနက အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပေးပို့လာသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်သည်။“၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပြဌာန်းရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ”၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မတိုင်မီ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကို မဖြစ်မနေ ပြဌာန်းနိုင်ရေး။၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျရေးအတွက် အဓိက လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများကို အခွန်ထမ်းပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် လိုလားစွာ ပေးဆောင်နိုင်သည့် အခွန်နှုန်းထားများနှင့် အညီ ကောက်ခံရရှိနိုင်ရေး။၃။ ပြည်သူလူထုအပေါ် အဓိက ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေမည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ခေတ်ကာလ အခြေအနေ နှင့်လျော်ညီစွာ ပြဌာန်းပြီး ပြည်သူနှင့်အတူ နွေဦးတော်လှန်ရေး အမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်စေရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး။၄။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်လိုအပ်ချက်ကို ပြည်သူများလိုလားစွာ ထမ်းဆောင်သည့် အခွန်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများဖြင့် စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ရေး။၃။ ကာကွယ်မှုပေးရန် တာဝန်ရှိမှု (Responsibility to Protect) ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးကို “ကာကွယ်မှုပေးရန် တာဝန်ရှိမှုနှင့် ဆိုးဝါးပြင်းထန်သည့် လုပ်ရပ်များ ကာကွယ်တားဆီးမှု တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း တက်ရောက် စကားပြောကြားခဲ့သည်။ ပြောကြားမှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု အပါအဝင် အခြားဆိုးဝါးသော ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများကို တာဝန်ခံမှုရှိရေး တို့အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း၏ ထောက်ခံ အားပေးမှုဟာ အထူးအရေးကြီးကြောင်း၊ မြန်မာစစ်တပ်၏ ပြစ်ဒဏ် ခတ်ခြင်းမှကင်းလွတ်နေသော ဆိုးဝါးသည့် အစဉ်အလာကို ရပ်တန့်ရာမှာ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီအနေဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ စိစစ်မှတ်တမ်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကျား/မ အခြေခံသည့် အကြမ်းဖက်မှုသည် မြန်မာစစ်တပ်စစ်ဆင်ရေး၏ ဝိသေသ လက္ခဏာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဆက်စပ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုဟာ မြန်မာစစ်တပ်၏ စစ်ဗျူဟာ တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကျူးလွန်ခဲ့၊ ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်သည့် ပြစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်တရားရုံး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လွတ်လပ်သော စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးယန္တရား အပါအဝင် အခြားအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေ၊ တာဝန်ခံမှု ဆိုင်ရာ ယန္တရားများနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနက အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပေးပို့လာသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်သည်။“၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပြဌာန်းရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ”၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအား အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပြဌာန်းလိုက်ပါသည်။၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မတိုင်မီ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကို မဖြစ်မနေ ပြဌာန်းနိုင်ရေး။၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျရေးအတွက် အဓိက လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများကို အခွန်ထမ်းပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် လိုလားစွာ ပေးဆောင်နိုင်သည့် အခွန်နှုန်းထားများနှင့် အညီ ကောက်ခံရရှိနိုင်ရေး။၃။ ပြည်သူလူထုအပေါ် အဓိက ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေမည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ခေတ်ကာလ အခြေအနေ နှင့်လျော်ညီစွာ ပြဌာန်းပြီး ပြည်သူနှင့်အတူ နွေဦးတော်လှန်ရေး အမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်စေရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး။၄။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်လိုအပ်ချက်ကို ပြည်သူများလိုလားစွာ ထမ်းဆောင်သည့် အခွန်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများဖြင့် စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ရေး။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီpdf ဖြင့်ရယူရန် နှိပ်ပါ။